KISS: ny fahatsorana no lakilen'ny fiainana mahomby
Ny fahatsorana no lakilen'ny fiainana mahomby
Zoma, Febroary 5, 2010 Talata, Aprily 1, 2014 Travis Smith
Mpanakanto sy mpanao sary Nick Dewar nodimandry tamin'ity herinandro ity. Niasa tamina orinasa maro samihafa izy Ny Volana Atlantika mankany amin'ny Random House, manome sary manazava ireo teny mahaliana ao anaty lahatsoratra na boky. Ny sangan'asa Nick Dewar tiako indrindra dia mampiseho ny filozofiko matihanina sy manokana:
Ny fahatsorana no lakilen'ny fiainana mahomby.
Ity dia famerenana matihanina sy mahay mandaha-teny kokoa ny fomba KISS voasedra:
Tsia, tsy izany KISS -
Ny fitsipiky ny KISS -? Ataovy Tsotra, Hadalana.?
Ireo dia samy fandikana maoderina an'ny Occam's Razor, izay milaza? Ny entities tsy tokony hitombo mihoatra ny filàna ,? na amin'ny ankapobeny, 'ny tetika tsotra indrindra no mitady ny tsara indrindra.?
Ka maninona aho no milaza izany aminao? Maninona aho no misarika ny filozofa taonjato faha-14, Ace Frehley, ary skoto vao maty tany amin'ny bilaogy? Satria ao amin'ny fiarahamonina haingam-pandeha haingam-pandeha, haitao avo lenta antsika mandrakariva, hadinontsika ny manandrana mamaha olana amin'ny vahaolana tsotra. Matetika loatra ny olona rehetra dia mitady teknolojia vaovao na fomba vaovao hamahana olana iray rehefa afaka mampiasa vahaolana tsotra kokoa izahay izay mitaky vola kely ary manome tombony maharitra kokoa.
Ity filozofia ity dia miresaka momba ny fampiasa amin'ny vokatra ihany koa. Satria ny vokatrao dia manana endrika misimisy kokoa dia tsy midika fa hamaly ny filan'ny mpanjifanao izany. Raha tsy azonao antoka ny fahatakaranao ny mpanjifanao? filàna, manana olana lehibe sy lehibe kokoa ianao noho ireo fiasa hampiharina. Mila mahatakatra tsara kokoa ireo mpampiasa anao sy ny mpanjifanao ary ny tenanao ianao. Aza mitsabo fotsiny ireo soritr'aretina. Ataovy tsotra izany, ary fantaro izay tena mitranga. Ary tsarovy -
Oh, ary tsarovy koa fa ny KISS dia mamy ihany koa!
Teraka sy lehibe tany amin'ny tany lavitra antsoina hoe Nebraska i Travis, ary taorian'ny fianarany tany amin'ny oniversite tany Missouri dia nahavita ny MBA sy Masters of Psychology sosialy tao amin'ny Ball State University. Travis dia zavatra maro, toy ny cameraman, tutor, disc jockey, underwriting salesman, barista, mpizahatany mpizahatany, bibliothèque, artista sandwich, manager ofisialy, mpikaroka, lohahevitra fikarohana, HR kekurangan, ary manager manager, izay nanomana azy daholo. ho an'ny andraikitry ny User Experience Analyst. Ao amin'ny Tuitive, izy no miandraikitra ny fikarohana ataon'ny mpampiasa, ny fitsapana ny mpampiasa, ny maodelin'ny mpampiasa, ny fanangonana ny fepetra ary ny fitazonana ny zanak'olombelona amin'ny endrika mifototra amin'ny olombelona.
Amin'ny vanim-potoanan'ny Internet dia tsy azo odian-tsy hita ny mpanjifa